Te-hanana Antoka ny Mpanatontosa Sarimihetsika iray Hoe Hanana Anjara-Toerana ao amin’ny Fitantarana Amerikanina Ireo Tantaran’ny Teratany Tompontany Voalohany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2018 2:25 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, русский, Português, English
Joanelle Romero. Sary: tlotra am-panajàna avy amin'i Joanelle Romero…
Ampahany amin'ny andiany antsoina hoe “The Media Disruptors” ity tantara nataon’ i Christabel Nsiah-Buadi ho an'ny GlobalPost ity, momba ny fanambin'ireo vehivavy manoloana ny fomba fitantaràna efa voapetraka ela. Tamin'ny voalohany, nipoitra tao amin'ny PRI.org tamin'ny 8 Martsa 2018 ilay izy, ary naverina navoaka eto toy ny ampahana fiarahamiasa eo amin'ny PRI sy Global Voices.
Nanoratra ny tantara i Joanelle Romero rehefa niakatra an-tsehatra tao amin'ny “Ilay Vehivavy Antsoina Hoe Hatter Fox“:
Amerindianina voalohany nanana anjara asa fototra tao anatinà sarimihetsika maoderina izy, izay nandeha tamin'ny fahitalavitra tamin'ny taona 1977. Ity ihany koa no tantara maoderina momba ireo vehivavy teratany voalohany novokarina tany Etazonia.
Teraka tao Hollywood i Romero, zanaka mpilalao sarimihetsika iray, Rita Rogers, izay nilalao tamin'ireo sarimihetsik'i Elvis Presley. Tamin'ny faha 12 taonany, lasa mpiantoka ara-dalàna an'i Romero i Dennis Hopper. Ambony kokoa noho ny lisitra lavabe misy ireo anaran'ny indostrian'ny sarimihetsika anefa ny tantarany.
Amin'ny maha-mpanorina ny Ivontoerana Fankalazana ny Firenena Mena azy, mitarika ny tantara momba ireo vahoaka'ny Firenena Voalohany i Romero, any amin'ny fahitalavitra, sarimihetsika ary mozika.
Christabel Nsiah-Buadi: andao atomboka amin'ny anjara asanao tao amin'ny “Ilay vehivavy antsoina hoe Hatter Fox.” Tamin'ny taona 1970 tany izy iny. Raha izany vanimpotoana izany, toy ny inona no zavatra niainana teo amin'ny fanatontosana azy sy ny tantara?
Joanelle Romero: tsy nobeazina tao anatin'ny toeram-pitahirizana aho. Nobeazina tao Hollywood aho ka tsy dia niaina loatra fanavakavahana mivantana. Fanamby be tamiko ny nanao iny sarimihetsika iny satria niaina mivantana ny fanavakavaham-bolonkoditra aho. Tadidiko, tao amin'ny efitranoko tao amin'ny hotely, niantso ny reniko aho, ary niteny hoe, “Tsy tian'izy ireo aho satria Indianina”.
17 na 18 taona aho tamin'ireny, ary fotoana tena mafy tamiko tokoa ireny, satria tsy nisy fanavakavaham-bolonkoditra tao amin'ny toeram-ponenana niaviako.
Ahoana ny nanaovanao izany?
Fotoana lava be teo amin'ny fianako no nanaovana azy io, sy nahavitana azy, indrindra indrindra fa tao anatin'ny indostrian'ny sarimihetsika. Izaho no teratany tompontany mpilalao sarimihetsika nikarama lafo indrindra nanditry ny taona teo amin'ny fahitalavitra. Efatra ambin'ny folo taona lasa izay, nailiky ny NBC, CBS, ABC sy Fox tanteraka tsy ho ao anatin'ny fitantarana ireo vehivavy teratany. Indraindray, misy mpilalao iray, lehilahy mandritra ny fampisehoana mitohy, saingy eny, nalàn'izy ireo tanteraka avy tao anatin'ny fitantarana ny vehivavy terataninay, 14 taona lasa izay. Niresaka tamina tambajotra aho fooana vitsy lasa izay ary niteny izy ireo hoe, “Eny, nanana mpilalao iray izahay.” Sanganehana aho ho azy ireo. Toy ny hoe, ahoana no ahazoanao miteny toy izany?
Mbola lavitra ny lalana hodiavinay miaraka amin'ity tantara ity. Nisy sarimihetsika iray izay, izay nahazo ny loka rehetra tamin'ny [Fetiben'ny Sarimihetsikin'ny Firenena Mena], antsoina hoe “Wind River“. Nahasarika ny firaondraonan'ny Oscar ho any aminy io sarimihetsika io, ary mitantara ny vehivavinay izay tsy hita sy novonoina. Izany, raha ny eritreritro no nanokatra ity adihevitra manontolo ity mety tsara ho an'ireo vehivavy teratany any anaty sarimihetsika. Aiza isika?
Nahoana no eritreretinao fa nalàna avy tao anatin'ilay fitantarana ireo vehivavy teratany?
Izany no foto-pampianaran'ny didiko fe-lehibe sy ny fanalikàna. Manaranaka izany, nolovaina avy tamin'ny fotoana nakàna taminay ny taninay. Izao no iraka manontolo notontosaina tamin'izany, tsy manana firenena izy ireo rehefa fafànao ireo vehivavy sy ankizy. Efa voaporofo fa lasa fitsipika izany rehefa maheno izany foana ianao. Avy eo nalàna tsy ho ao anatin'ny fitantarana izahay.
Mpikambana ao amin'ny Akademia [ho an'ny Zavakato sy Siansàn'ny Sarimihetsika] aho. Izaho irery ihany no teratany mpitantana, mpamokatra izay nanao ny lisitra savaranonandon'ireo horonantsary fanadihadiana ho an'ny Oscars (ho an'ilay sarimihetsika “Famonoana Faobe Amerikàna: Rehefa tapitra izao rehetra izao, mbola ho Indianina foana aho“). Fa maninona aho no tsy mitantana tantara mitohy aminà fahitalavitra na zavatra hafa ? Fa maninona no tsy notolorana na dia ny ho alok'olona amina fahitalavitra monja aza raha ny fahaizan'ny olona mitantana no manahirana azy ireo? Tsy dia misy fandaharana mahafa-po loatra.
Oviana no lasa mpiaro mavitrika ny fandraisan'anjaran'ireo olon'ny Firenena Voalohany any amin'ny media ianao?
Tsy mihevitra ny tenako ho mpikatroka mafana aho, ary tsy tolona iray izahay, no sady tsy mifandray amina fihetsiketsehana. Matihanina izahay, tale, mpanoratra, mpilalao sarimihetsika, tarika. Matihanina izahay. Rehefa voalaza izay, nataoko io sarimihetsika io mba ho an'i Ted Turner [mpanjakan'ny media Amerikanina] . Nantsoina hoe “Ilay fahagagana any amin'ny tany efitra” izany. Sarimihetsika Krismasy momba ny nitondran'izy ireo an'i Jesoa ho any amin'ny Indianina izy io; zavatra hafahafa izany. Vizana be aho nitafy hoditra serfa sady niteny hoe, “Mila hena saosy bebe kokoa aho”.
Nivavaka fotsiny aho tamin'iny andro iray iny ary nijery ity hazo ity ka nahita ity voromahery tsara tarehy niaraka tamin'ny fianakaviany ity. Hoy aho hoe “Hiditra amin'ny fitantanana tsotr'izao aho, ary hanomboka hanao ny zavatro manokana, satria tsy te-hiandry aho, reraka aho miandry.” Telo ambin'ny roapolo taona lasa izay, nanomboka ny fikambananay izay tsy mitady tombony aho, ny Ivontoerana Fankalazana ny Firenena Mena izany. Izahay no fikambanana artistika sy ara-kolontsaina teratany naharitra indrindra tao Los Angeles.
Eo ambanin'izay faneva izay, manana ny Fetiben'ny Sarimihetsiky ny Firenena Mena izahay ary ao amin'izay vatan'ny Fetiben'ny Sarimihetsiky ny Firenena Mena izay, nampidirinay foana ireo vehivavy teratany ho any anatin'ny sarimihetsika sy fahitalavitra. Avy eo naorinay ny Fetiben'ny Vehivavy Teratany any Anaty Sarimihetsika. Avy eo natsanganay ny Tambajotran'ny Fahitalavitry ny Firenena Mena izay natomboka tamin'ny taona 2016. Nandefa ny fifandraisana mivantana an-tserasera talohan'ny Netflix izahay, talohan'ny Hulu. Lasa aloha tamin'ny vanim-potoana nisy anay izahay. Nanana mpijery 10 tapitrisa tany anaty firenena 37. Amin'ity taona 2018 ity, hanomboka ny efitranombaovaon'ireo votoaty teratany rehetra izahay. Hampakatra lohateny 300 vaovao ao amin'ny tambajotranay ihany koa izahay.
Iza no manatontosa ny betsaka amin'io votoaty io?
Manana ekipa ahitana olona dimy izahay, izay manampy amin'ny zavatra rehetra, manomboka amin'ny sary famantarana hatrany amin'ny sarisary sy ny fandefasana azy, ny fanitsiana, izany asa rehetra izany. Raha ny momba ny ao anatiny indray, dia avy any amin'ireo mpanantotosa avokoa. Manana vaomieram-pitantanana ihany koa izahay. Misy lisitra olo-malaza maro ao amin'ny vaomieranay, eo ihany koa ireo mpitarika ny foko isan-karazany manerana ny firenena, ireo teratany mpilalao. Manampy anay tokoa izy ireo, manoro làlana anay eo amin'ny iraka tontosanay, mijanona ao anatin'ny zara asanay fa tsy mivaona.
Izao ny anay “Teratany miandraikitra ny tantarany.” Izany no ho tantaranay mandritra ny fotoana elaela, mandroso foana, mandrapisy fiovàna eo amin'io indostria io.
Olana be amiko rehefa tsy mahita ny tenany any amin'ny media ny zanakay sy ny tanoranay. Miparitaka be ny olana famonoana tana ataon'ireo tanora ao anatin'ny fiarahamoninay. Mihevitra aho fa ny tsy fahitan'izy ireo ny tenany no anton'izany, tsy misy na inona na inona ho an'izy ireo hamantarany ny tenany. Toy ny hoe, inona ny ilàna izany?
Ireo vehivavy voavono sy tsy hita ihany koa io. Olona afaka tamin'ny herisetra ara-nofo sy fametavetana aho. Manan-danja tokoa ny fandraisako fitenenana amin'ny maha vehivavy, reny, renibe teratany ahy.
Inona no heverinao fa fahombiazana lehibe ho anao? Na zavabita?
Hay, voalohany indrindra, ny nahaterahan'ny zanako roa. Ary ny zafikeliko, renibe aho amin'izao.
Amin'ny maha artista ahy, dia ny maha-mpikambana ahy ao amin'ny Akademia. Izany no nofinofiko lehibe indrindra nanomboka tamin'izaho telo taona, tamin'ny vao nanomboka nilalao niaraka tamin'y reniko sy ny raibeko aho. Nihazona kifafa aho sady nitanisa hatrany hatrany ireo kabariko mandritra ny Oscar.
Nahavita, toy ny artista, nanao “seho voalohany” maro, toy ny tamin'ny “Ilay vehivavy antsoina hoe Hatter Fox”. Satria vehivavy Navajo ilay nohararaotina ary tsy tany amin'ireo toeram-pitahirizana izy, nandeha tany [tany amin'ny fisafidianana] aho tsy nanao ankosotra, ny voloko tsy nibango, tsy nikiraro, tsy nanao firavaka, pataloha rovitra. Rehefa nandeha teo amin'ny mpitantana sy ny mpanatotosa aho, hoy izy ireo, “Iza no anaranao?” niteny aho hoe, “Hatter Fox no anarako.” Teo noho eo ihany, hoy izy ireo, “Azonao ilay anjara asa”
Raha ny momba ny vondrom-piarahamoninay, mirehareha aho amin'ny nanangananay ilay fikambanana tsy mitady tombontsoa, 23 taona lasa izay. Nihalehibe fotsiny hatrany hatrany izahay ary nandroso miaraka amin'ny fitantaranay, ary tsy maka ny tsia ho valinteny. Tsy misy izany teny izany ao anatin'ny voambolako.
Mpamorona sy toniandahatsoratra ao amin'ny “The Media Disruptors” i Christabel Nsiah-Buadi ary mpanatontosa media ho an'ny sarambabem-bahoaka. Manoratra ihany koa izy momba ny media, ny kolotsaiana ary ny politika. Afaka manaraka azy ao amin'ny Twitter ianao: @msama.